Tesla ga-emepe ụlọ ahịa mbụ ya na Spain na Barcelona | Akụkọ akụrụngwa
Ahịa ụgbọ ala eletrik na-aga n'ihu na-eto eto na oke ọsọ, n'ụzọ dị ukwuu n'ihi atụmatụ na-adọrọ mmasị na-arịwanye elu maka na naa, n'enweghị obi abụọ ọ bụla otu n'ime ụlọ ọrụ ndị isi. Anyị amatala ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ Elon Musk hibere ma duzie ya ịmalite ịmalite ụlọ ahịa, ma ọ bụ kama ire ahịa gburugburu ụwa.
N'ime atụmatụ ahụ bụ imeghe ọtụtụ ụlọ ahịa na Spain, mgbe ndị dị mkpụmkpụ mepee ma na mba anyị ma na Portugal. Ma ugbu a Anyị nwere nkwenye gọọmentị na ụlọ ahịa mbụ na nke edozi na Tesla na Spain ga-emeghe ọnụ ụzọ ya na Barcelona n'oge na-adịghị anya.
Na mgbakwunye, ekwuputala na mgbe emepere ụlọ ahịa a, anyị ga-enwe ọzọ nwere njirimara yiri ya na obodo Madrid, ikekwe na Calle Serrano 3, ọ bụ ezie na ọ nweghị nkwenye gọọmentị nke ikpeazụ
Lọ ahịa Tesla dị na Barcelona anyị maara na ọ ga-adị na Calle Rosselló 257, dị ezigbo nso na Passeig de Gràcia na Las Ramblas, usoro ole na ole site na Diagonal metro. Openingbọchị mmeghe ka bụ nnukwu akara akara, mana ihe niile na-egosi na anyị agaghị echere ogologo oge iji hụ, nwalee na onye maara ma ịzụta ụfọdụ ụdị ụgbọ ala dị iche iche nke Tesla na-enye ugbu a.
Ichere na Tesla ga-aga nke ọma na imeghe ụlọ ahịa ọhụrụ ya na mba anyị?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Tesla ga-emepe ụlọ ahịa mbụ ya na Spain na Barcelona
Ahụmahụ egwuregwu nke Xbox One X ga-adị nso na nke PC